Joog Ninkii Laga Waayo Soo Jiibsaa Laga Helaa “Zooroo Zooroo Ya Madaal” – Rasaasa News
Joog Ninkii Laga Waayo Soo Jiibsaa Laga Helaa “Zooroo Zooroo Ya Madaal”
Hargeysa, February 3, 2012 [ras] – Maamul gabaleedka Somaliyeed ee Somaliland ayaa sheegay in uu ka qayb galayo shirka wada xaajoodka Somaliya loogu qabanayo dalka Ingriiska.
Burburkii dalka Somaliya gabal ka mid ah gabalada dalka Somaliya ayey dadkiisu jeclaysteen in ay noqdaan dal ka go,a dalka iyo dadka Somaliyeed inta uu dhibaatada ku jiro, waxayna samaysteen maamul iska fogeeyay dadka iyo dalka Somaliya.
Dhinaca kale waxaa iyana samaysmay maamul gabaleedyo Somali ah oo samaystay maamul sugay amaankooda balse marna aan ka daalin ka qayb galka iyo soo dhawaynta danaha dalka iyo dadka Somaliyeed.
Siyaasiyiinta iyo shacabka gabalka waqooyi galbeed ee Somaliya oo 21kii sano ee u dambayay isticmaalayey magaca Somaliland, ayaa iska dhaadhiciyey in ay noqon karaan dal ka madaxbanaan Somaliya inta ay qalantahay. Arintaas oo aad moodo ugu dambayn in ayna suurto gal ahayn hambiga maamulka Somaliland
Waa wax aan aduunka caadi ka ahayn in dal uu ka dhacay dagaal sokeeye la kala gooyo iyada oo ay si khaldan uga faa,iidaysanayo koox ama gabal ka mid ah dalkaas.
Runtii Shacabka iyo siyaasiyiinta gabalka waqooyi galbeed ee Somaliya, marka laga reebo dad yar waxay isku raaceen in ay ka go,aan Somaliya. Waxayna runtii muujiyeen isku day nidaam wanaagsan oo maamul, in kasta aaminsanaantoodu ka soo horjeedo shuruucda caalamka iyo midka qaranka Somaliya.
Dadaalka badan ee ay muujiyeen dadka reer waqooyi galbeed Somaliya waxay garawsho kaga waayeen caalamka iyo Somalida labadaba iyo waliba qaar iyaga ka mid ah.
Dadweynaha Somaliyeed ayaa aad uga xumaaday mar sanadkii 2000 ay banaan bax ka dhacay Hargeysa ku gubeen calanka dalka Somaliya.
Siyaasiyiin badan oo Somali ah ayaa kula taliyey reer waqooyiga in hadii ay wax tabanayaan ay ka shaqeeyaan nabada dalka Somaliya, ka dibna ay waydiistaan go,itaan dadka somaliyeed ee ay walaalaha yihiin.
Maanta dalka Somaliya waxaa u taliya aduunka, ka dib kolkii la ogaaday in ayna tashan karin, waqooyi galbeed Somaliya [somaliland], waxaa loo sheegay in ay ka mid yihiin dadkaa Somaliyeed ee uu aduunku maanta u talinayo. Waxaana lagu khasbay in ay ka qayb galaan talada dalka Somaliya, meela iska dhigaan waxa ay sheeganayaan.
Siraanyo ayaa arintaas ogolaaday balse ku dacweeyey Ingriiska in mucaaradkiisu arinka diidan yihiin. Waxaana arinkaas Hargeysa u tagay safiirka Ingriiska u jooga Ethiopia oo u sheegay mucaaradka in laftigooda ay soo raacaan madaxweyne Siiraanyo, wayna aqbaleen.
Sida lagu qoray barta Internetka Jamhuuriya Maxamed Cabdulahi oo u ah maamulka Somaliland arimo dibadeed, ayaa sheegay in ay goob joog uun ka ahaanayaan shirka London, balse ayna ka qayb qaadanayn ajandaha shirka. Wali waxaad moodaan in shacabka reer waqooyi been ay ku maaweelinayaan siyaasiyiintoodu.
Maamulka Somaliland waa markii ugu horaysay ee ay aqoonsato in hanaankii ay ku socotay wax lagu noqon karin balse la raaco shuruuc caalami ah.
Maamulka waxa ka hoos baxay beelo u dhigma oo ay wada dagaan waqooyiga dalka Somaliya oo iyaga laftigoodu samaystay maamulo.
Somaliya waxaa maanta jooga 8,000 oo ciidamo Afrikan ah, waxaana la sheegay in tirada la gaadhsiin doono 17,000 oo ciidan Afrikan ah kuwaas oo ka hawl gali doona guud ahaan Somaliya.
Shirka ka dhacaya London bishan waxaa loogu diyaar garoobayaa dhismaha dawlada Somaliyeed oo aan ku meel gaadh ahayn. Waxaana dhismaheeda iyo maamulkeeda wadi doono dawlado reer galbeed ah, kuwaas oo ay ciidamadoodu tagi doonaa dalka Somaliya sanadka 2013ka.
Wafti uu Hogaaminayo Dr. Glaydh oo Gaadhay Addis Ababa